HomeWararka MaantaJose Mourinho oo Intaanay Bishani Dhamaan van Gaal Kala Wareegaya Shaqada Manchester United
Wargeyska The Sun ee ka soo baxa wadanka Ingiriiska ayaa sheegay in kooxda Manchester United ay damacsan tahay in inta aanay dhamaanin bishan aynu ku jirnaa ay xilka ku wareejiyaan tababare Jose Mourinho kadib, guuldaradii Sabtidii 2-1 ka ahaye ee ka qabsatay Sunderland oo baaq u dirtay maamulka naadiga.
Jariidadu waxay intaas raacisay inay United ka go’nayd inay cawda u jarto, macalinka reer Holland ee 64 jirka ah dhamaadka xilli ciyaareedkan, balse natiijadii Sabtidii ay soo dedejisay samir yaraanta maamulka kooxda oo ku tallo jiray bishan dhexdeedaba inay u gacan galiyaan Mourinho.
Waxay maamulka kooxdu isku raacsan yihiin, inaanay waxba kaga lumayn u gacan gallinta kooxda ee tababarihii hore naadiga Chelsea looga qaaday, kaas oo ay ku wadaan inuu xilka tirsado ka hor ciyaarta horyaalka ugu soo xigta ee ay Arsenal wajahayaan 28 ka bishan February.
Kadib warar laysla dhex marayey muddooyinkii u dambeeyey, waxa la aaminsan yahay in qalinka ay ku duugeen Manchester United iyo Jose Mourinho heshiis saddex sannadood ah oo uu kula wareegayo kooxdaas.
Wargeyska Daily Mirror ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska ayaa afar cisho ka hor boggiisa hore waxa uu ku qoray qodobbada heshiiska ay wada galeen labada dhinac, lacagta uu bishii xoogsan doono, ciyaartooyada la fasixi doono iyo arrimo kale.
Labada dhinac waxay qalinka ku duugeen heshiis ka bilaabmi doona bisha June ee sannadkan, markaas oo United ay baabi’in doonto heshiiskii ay Manchester United kula jirtay Louis van Gaal oo hoggaamintiisa iyo natiijooyinka uu kooxda u keenayba aanay qancinin taageereyaasha iyo maamulkaba.
Lacagta uu qaadan doono
Qodobada heshiiska waxa ugu muhiimsan inuu tababare Jose Mourinho xoogsan doono lacag badan sannadkii, taas oo ah in ay xisaabtiisa ku dhici doonto £15 milyan xili ciyaareed kasta.
Yaa uu keenayaa United
Waxa labada dhinac ay isla qaateen in kooxda la keeno agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Atletico Madrid oo lagu magacaabo Andrea Berta, una dhashay waddanka Italy.
Chris Eubank Jr vs Avni Yildirim – Full Fight HD
Diego Costa Oo Ku Taamaya Hanashada Champion League
Borussia Dortmund Oo Wacdaro Ku Dhigtay Real Madrid – Kaalinta 1 aad Ee Groupkana Ku Baxday
07/12/2016 Abdiwahab Ahmed